Khilaaf soo kala dhex galay C/llaahi Yuusuf iyo Cali Max’ed Geedi
Wararkii: Sept 24, 2007
Ra’isul Wasaaraha DFKMG Geedi “Dowladda Itoobiya waxay dhab ka tahay nadda Soomaaliya”
Iska hor imaad fiidnimadii xalay ka dhacay Qabuuraka Barakaat ee duleedka Muqdisho
Dilal joogto ah oo ka socda Magaalada Muqdisho
Yuusuf Daba-geed: Gobalka Hiiraan waxaa ka mamnuuc ah in hub lagu dhex qaato...
Dowladda Federaalka oo sheegtay in ay gacanta ku dhigeen hub
Qaramada Midoobey oo sheegtay in Muqdisho haatanay nabad tahay
Ahmedou Ould Abdallah “Dowladda Federaalka waxay noo sheegtay in ay damaanad qaadeyso Saxaafada madaxa banana”
Markii dhawaan la soo xiray guddoomiyihii Maxkamadda sare Yuusuf Cali Haaruun ayaa waxaa dhacday in kulan ay isugu yimaadeen golaha Wasiirada oo uu shir guddoominayay Cali Max’ed Geddi la isku raacay in si sharci daro ah uu ku xiran yahay Guddoomiyaha Maxkamadda sare, sidoo kale waxaa xilkii kulankaasi looga qaaday xeer ilaaliyihii guud ee qaranka C/llaahi Daahir Barre, hase yeeshee xarigaasi iyo xil ka qaadistaasi waxa uu saameyn ku yeeshay Madaxweyne C/llaahi Yuusuf Axmed iyo Ra’isul Wasaare Cali Max’ed Geedi, waxayna keentay in xeer ilaaliyaha shirkii golaha Wasiirada ee xilka looga qaaday uu ku tilmaamo mid aan waxba ka jirin.
Guddoomiye ku xigeenka Baarlamaanka Prof. Max’ed Cumar Dhalxa ayaa isna waxa uu ka dhawaajiyey inuu khilaaf ka dhex jiro Madaxweyne C/llaahi Yuusuf Axmed iyo Ra’isul Wasaare Cali Max’ed Geedi. Khilaafkaan ayaa waxa uu keeni karaa in uu saameyn ku yeesho hab u socodkii Dowladda Federaalka, ilaa iyo haatanna ma jirto cid u istaagtay in ay arimahaasi kala dhex galaan, marka laga reebo Guddoomiye ku xigeenka Baarlamaanka Prof. Dhalxa oo ugu baaqay Baarlamaanka in uu u istaago sidii loo dhex daadin lahaa ama loo dhameyn lahaa khilaafka u dhexeeya Madaxweynaha iyo Ra’isul Wasaaraha.
Labada mas’uul ayaa iyo hadda ka hadlin khilaafkaasi, iyadoo golaha Wasiirada ay isku raaceen in Guddoomiyaha Maxkamadda sare uusan soo xeri gelin xeer ilaaliyaha guud balse xarigiisa ay leeyihiin golaha Baarlamaanka. Waa khilaafkii labaad ee soo kala dhex galay Madaxweynaha iyo Ra’isul Wasaare tan iyo markii la dhisay Dowladda Federaalka, iyadoo 2006-dii khilaaf soo kala dhex galay uu dhex dhexaadin ka sameeyey wasiirka arrimaha Dibadda Itoobiya Musfin.
Ra’isul Wasaaraha DFKMG Cali Max’ed Geedi oo shalay ka qaybglaay kulan lagu dhisay Madashada Bulshada rayidka ee gobalka Banaadir ayaa waxa uu u soo jeediyey Beesha Caalamka in gargaar lala soo gaaro dadka Soomaaliyeed ee ku barakacay dagalada iyo qalalaasaha ka taagan dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho.
“Dowladdu waxay u taagan tahay nabad iyo dib u heshiisiin, caalamkuna waa in uu u istaagaa sidii uu u gargaari lahaa ummadda Soomaliyeed” ayuu yiri Cali Max’ed Geedi oo sheegay in beesha caalamku ay ka gaabiyeen sidii Ummadda Soomaaliyeed ay wax ugu qaban lahaayeen.
Ra’isul Wasaare Geedi mar uu ka hadlayay joogitaanka ciidamada Itoobiya ee dalka Soomaaliya waxa uu sheegay in ciidamada Itoobiya ay joogi doonaan gudaha dalka Soomaaliya, markii uu hadlayey waxa uu farta ku fiiqayey sawirka Ra’isul Wasaaraha dalka Itoobiya oo uu ku tilmaamay mid dhiig badan u huray shacabka Soomaaliyeed.
“Hadii la oran jiray khilaaf ayaa horey u dhex maray Itoobiya iyo Soomaaliya khilaafkaasi waa uu dhamaaday, dowladdana itoobiyana waxay dhab ka tahay in ay Soomaaliya nabadeyso” ayuu yiri Geedi oo aan soo hadal qaadin khilaafka kala dhex galay isaga iyo Madaxweyne C/llaahi Yuusuf Axmed ee ku saabsan xil ka qaadista xeer ilaaliyaha guud ee qaranka.
Xalay fiidnimadii ayaa iska hor imaad hubka noocyadiisa kala duwan waxa ka dhacay agagaarka Qabuuraha Barakaat ee duleedka Magaalada Muqdisho, iyadoo dadku ay maqlayeen hugunka rasaasta la isweydaarsanayay.
Dagaalkaan ayaa waxaa la sheegay in uu ahaa mid u dhexeeyey ciidamada Dowladda oo halkaasi fariisin ku leh iyo kooxaha ka soo horjeeda, ilaa iyo haddana lama oga qasaarihii uu keenay dagaalkaasi, iyadoo ay ahayd waqti habeen ah isku socodkuna uu aad u yaraa, balse warar ayaa waxay sheegaya in goobtii ay ku sugnaayeen ciidamada Dowladda laga qabsaday sidoo kalana gaari ay Ciidamada Dowladdu lahaayeen laga gubay.
Waxaa maalmahan sii xoogeysanayey iska hor imaadyada u dhexeeya ciidamada Dowladda iyo kooxaha ka soo horjeeda, waxayna taasi keentay in dad badani ka qaxaan guryahoodii oo ku yaala Magaalada Muqdisho.
Waxaa Magaalada Muqdisho ku soo xoogeysanaya dilalka, waxayna kuwii ugu dambeeyey ay shalay ka dhaceen Suuqa Bakaaraha, waxaana lagu dilay labo qof oo mid ka mid ah la sheegay in laga soo bixiyey masjid ku yaala Suuqa Bakaaraha, kadib markii uu halkaasi uu nafta ula cararay.
Xalay fiidnimadii ayaa xaafadda Buulaxuubey waxaa lagu dilat yar halkaasi ku lahaa Branch laga dirsado Taleefanada, waxaana dilkiisa gaystay labo nin oo wadatay gaari Mark II, waxaana dilkaani si weyn walwal luga muujiyey dadweynaha ku nool Magaalada Muqdisho oo ku tilmaamay kuwo laga naxo oo sii cakirinaya xaaladda murugsan ee Magaalada Muqdisho.
Yuusuf Daba-geed oo sheegay in ay mamnuuc Gobalka Hiiraan ka tahay hub lagu dhex qaato...
Guddoomiyaha gobalka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar (Yuusuf Daba-Geed) ayaa mamnuuc ku tilmaamay in Magaalada Baladweyne ee gobalka Hiiraan iyo waliba gobalkaasi Hiiraan hub lagu dhex qaato wixii haatan ka dambeeya, gaar ahaan ciidamada Dowladda oo uu sheegay in aysan hub ku dhex wadi Karin magaalada Baladweyne.
Yuusuf Daba Geed oo shalay shir jaraa’id ku qabtay magaalada Baladweyne ayaa sheegay in in askarigii lagu arko isaga Magalada qori ku dhex wadata isagoo aan la socon taliyihiisa ama ilaalo markaasi ka aheyn mas’uul uu muteysan doono xabsi, isla markaana qoriga laga wareegi doono, waxa uuna Yuusuf Daba Geed sheegay in ciddii ka dhega adeegta amarkaasi xabad laga lagu dhifan doono, isla markaana aan la isweydiin doonin.
Yuusuf Daba Geed ayaa amarkaan cusub ee uu soo rogay waxa uu sabab uga dhigay dhanka Amnga oo uu sheegay in maalmahan dambe sida uu hadalka u dhigay kooxo qas abuurayaal ah qaribeen, isla markaana waxa uu sheegay Yuusuf in si amniga loo soo celiyo hubku uu mamnuuc ka yahay magaalada Baladweyne.
Sarkaal u hadlay Dowladda Federaalka oo magaciisa ka gaabsaday ayaa sheegay in ciidamada Dowladda Federaalka ay gacanta ku dhigeen hub uu sheegay in la doonayey in lagu taageero kooxaha dagaalka kula jira ciidamada Itoobiya iyo Dowladda Federaalka oo ku tilmaamay qas wadayaal sida uu hadalka u dhigay.
Sarkaalkaan ayaa sheegay in hubkaasi lagu qabtay meelo kala duwan oo dalka Soomaaliya ka tirsan sida Maamulka Puntland, Sh/hoose iyo Gobalka Banaadir, waxa uuna dusha uga tuuray in hubkaasi ay doonayeen in ay dalka soo geliyaan kooxaha dowladda ka soo horjeeda oo uu sheegay in ay yihiin kuwo aan dooneyn in Soomaaliya nabad lagu soo dabaalo.
Sarkaalkaan ayaa sheegay in Ciidamada Dowladda Federaalka habeen iyo maalin u istaagi doonaan sidii ay amniga caasimadda dalka u xaqiijin lahaayeen, si gobalada dalka ugu sii gudbaan, isagoo sheegay in haddii Caasimadda la nabadeeyo ay gobalada kale arintoodu degi karto. Ma ahan markii ugu horeysay oo ay Dowladda Federaalka sheegto in ay gacanta ku dhigtay hub la doonayey in Magaalada Muqdisho la soo geliyo.
Ahmed Ould Abdallah oo ah ergeya cusub ee Qaramada Midoobey ee dalka Soomaaliya oo Nayroobi shir jaraa’id ku qabtay ayaa sheegay in xaalada Soomaaliya ay ka soo reyneyso isla markaana haatan nabadgelyada Magaalada Muqdisho la dhihi karo wax weyn ayaa is bedelay.
Safiirka oo dhawaan kulan Muqdisho kula yeeshay Madaxda Dowladda Federaalka ayaa sheegay Qaramada Midoobey ay taageero badan u fidineyso Dowladda Federaalka, isla makaana ay qayb weyn ka qaadan doono dib u dhiska dalka Soomaaliya.
Safiirka ayaa waxa uu sheegay in Qaramada Midoobey ay wado dadaalo badan oo beesha caalamka looga dhaadhicinayo in Soomaaliya si weyn loo taageero, waxa uuna sheegay in gaar ahaan dadaal loogu jiro sidii gargaar loogu fidi lahaa dadka Soomaaliyeed ee ku barakacsan duleedka Magaalada Muqdisho, oo iyagu haatan la soo sheeagyo in dhibaatooyin badan goobihii u qaxeen ku haysto, isla markaana aysan jirin Hay’ado gargaar soo gaarsiisay marka laga reebo Hay’ado yar yar oo wax xoogaa gargaar aan sidaasi u balaarneed gaarsiisay dadkaasi.
Ahmedou Ould Abdallah oo ah wakiilka cusub ee Qaramada Midoobey u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa sheegay in Dowladda Federaalka madaxdeeda ay ka wada hadleen arrimo ku aadan dhanka Saxaafadda madaxa banaan, waxa uuna sheegay Dowladda Federaalka ay ballanqaaday dhowritaanka Xoriyatul qawlka iyo waliba saxaafadda madaxa banana, waxa uuna wakiilku sheegay in uu aad uga xumaaday dhacdii dhawaan lagu weeraray Idaacadda Shabeele oo iyadu weli hawada ka maqan.
Ahmed Ould Abdallah ayaa sheegay in isagu uusan weli taasi kalsnoo ku qabin, balse uu si weyn ula socon doono waxa ka rumooba in Dowladda Federaalka ay cadaadiska ka qaadi doonto saxaafadda, inkastoo uu wakiilku sheegay in Dowladda ay cudurdaar ka bixisay weerarkii Idaacadda Shabeele oo ay ku tilmaantay mid ku dhacay si shil ah, oo uusan aheyn mid qorsheysan.
Wakiilka ayaa sheegay in weerarkii loo gaystay Idaacadda Shabeele ay tahay dhacdo aan iyadoo kale horey loo maqal, isla markaana fool xumo ku tahay Dowladda Federaalka.
Dhanka kale waxaa iyana wax laga xumaado ku tilmaamay weerarkii Idaacadda Shabeele ururada u dooda xaquuqda Aadanaha iyo waliba ku saxaafadda ee ka dhisan Caalamka daafihiisa kala duwan, waxayna si deg deg ah uga codsadeen Dowladda Federaalka in ay cudurdaar rasmi ah ka bixiso weerarkaasi, si ay Idaacaddu hawadaha ugu soo laabtao mar kale oo ay halkeedii ka si ambaqaado hawlihii ay u haystay shacabka Soomaaliyeed.
Faafin: SomaliTalk.com | Sept 24, 2007
Su’aalihii Baarlamaanku weydiiyey wasiirka Wasaaradda dalxiiska iyo duurjoogta Cali Xareed: Waxaa ka mid ahaa: “Waxaan maqalney in dowladii TNG-da ay dowlada Liibiya la gashay heshiis ay deyn uga qaadatay lacag dhan $7.5Milyan..”... Akhri Jawaabaha
.Sarkaal ka tirsan nabad sugida oo lagu dilay Muqdisho
.John Yates oo sheegay in xiligaan uusan tagi Karin Muqdisho
.Maamulka Somaliland oo ka carooday ciidamo Itoobiyaan oo..
.Wakiilka cusub ee Qaramada Midoobey Axmadow C/lahi oo..
.Xukuumadda Geedi oo sharci daro ku tilmaantay xariga loo..
Wararka oo dhan ka akhri halkan... Sept 23
Wasiirkii ugu horeeyey Baarlamaanka uu u hambalyeeyo oo noqdey wasiirka Dalxiiska iyo Duurjoogta
Xildhibaan Faarax Ismaaciil “xariga Gudoomiyaha Maxkamada sare ee DFKMG iyo Xaakim Sheegow wuxuu xad gudub..
Waraysi: Ma Dhabaa In Somali-land iyo Puntland Ay Isku RaacsanYihiin In Xuduudkoodu Yahay Adhicadeeye.
Ergada reer Puntland ee ka qayb galay Shirkii Casmara waa ku soo noqon doonaan Puntland